tamin'ny admin tamin'ny 2020-12-19
tamin'ny admin tamin'ny 2020-12-18
tamin'ny admin tamin'ny 2020-12-01
AUG: Ireo mpanjifa avy any Arabo dia mizaha ny entanay ary mitsidika ny orinasanay Ahmed dia niresaka ela be taminay, tamin'ny 20 AUG dia naniry ny ho avy izy ary hitsidika azy, rehefa avy nanamarina ireo santionanay tany amin'ny orinasa, nilaza taminay izy fa manana tetika te hiova , niresaka tamin'ny an'ny. injeniera ary manamboatra s ...
Karazan-kazo manao ahoana ny hazo mafy?
tamin'ny admin tamin'ny 2019-06-03
Karazan-kazo inona no atao amin'ny hazo mifangaro mafy? Hardwood no anarana ankapobeny karazan-kazo misy hakitroka sy hamafisana toy ny hazo terebinta, lavenona, lavenona, birch, elm, jujube, sns.
Inona ny kesika Citi? Inona avy no tena fampiasana ny hazo kypreso Douglas?
Anarana sinoa: Douglas fir / sedera mavo anarana anglisy: Douglas fir / d-fir Fianakaviana: Pinaceae Genus: Taxodium Kilasy tandindonin-doza: Zavamaniry voaaro voaaro voaaron'ny Firenena II (nankatoavin'ny Filan-kevim-panjakana tamin'ny 4 Aogositra 1999) Hazo lehibe maitso, miakatra hatramin'ny 100 metatra ny haavony, DBH hatramin'ny 12 metatra. Ny hodi-kazo dia ...